“Anagoo shirka joogno waxaa naloo sheegay in ammaanka musharixiinta ay halis ku jirto..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Anagoo shirka joogno waxaa naloo sheegay in ammaanka musharixiinta ay halis ku jirto..” (DHAGEYSO)
Waxaa durbadiiba soo baxaaya qeylo dhaan kasoo yeereysa qaar ka mid ah musharixiinta u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, iyagoona sheegay inay ka war-heleen in ammaankooda uu halis ku jiro.
Dhowr musharixiin oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in loo baahan yahay in la damaanad qaado ammaanka musharixiinta iyo goobta ay ka dhaceeyso doorashada 8-da bishaan aynu ku jirno ee Febraayo.
Musharax Maxamed Maxamuud Culusow oo ka mid ah musharaxiinta kulankaasi ka qeyb-gashay ayaa warbaahinta u sheegay in ammaanka musharixiinta la damaanad qaado.
Wuxuu sheegay inay haatan ka warheleen warar qatar lagu gelinaayo ammaanka musharixiinta iyo in magaalada la xiri doono muddo seddax illa afar maalmood ah.
“Anagoo shirka joogno waxaa naloo sheegay in ammaanka musharixiinta ay halis ku jirto, waxaana hay’adaha ammaanka waajib ku ah inay xaqiijiyaan ammaanka musharixiinta iyo goobta ay doorashadu ka dhaceeyso” Sidaas waxaa yiri musharax Maxamed Maxamuud Culusow.
Ugu dambeyntii, mushariixinta u tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay kasoo yeereysay qeylo dhaan aad u baahsan, waxayna qeylo dhaantooda sii badatay kadib markii ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in doorashada sanadkaan lagu shubto.